Isikripthi se-WordPress Esiphuthumayo se-WordPress | Martech Zone
Isikripthi sePhasiwedi Esiphuthumayo seWordPress
NgoLwesihlanu, Mashi 9, 2012 Douglas Karr
Njalo ngezikhathi ezithile, sihlangana nenkampani ene-WordPress ebanjelwe kuseva engakwazi ukuthumela i-imeyili. Lokhu kuchaza ukubhujiswa lapho ulahlekelwe yiphasiwedi ku-WordPress futhi udinga ukungena ngemvume ukuyibuyisa. I-WordPress igcina iphasiwedi ibethelwe, ngakho-ke nokufinyelela ku-database akusizi. Kepha uma ukwazi ukufinyelela kuseva nge-FTP, ungalayisha iskripthi esizokuvumela setha kabusha iphasiwedi yokuphatha ngekhasi. Nayi imininingwane evela kusayithi:
Idinga ukuthi wazi igama lomsebenzisi lomlawuli.
Ivuselela iphasiwedi yomlawuli futhi ithumele i-imeyili kukheli le-imeyili lomlawuli.
Uma ungayitholi i-imeyili, iphasiwedi isashintshwa.
Wena ungenzi udinga ukungena ngemvume ukuze uyisebenzise. Uma ungangena ngemvume, awudingi iskripthi.
Beka lokhu empandeni yokufakwa kwakho kwe-WordPress. Ungakulayishi lokhu kumkhombandlela wakho we-WordPress Plugins.
Susa iskripthi lapho usuqedile ngezizathu zokuphepha.
Gcina iskripthi esingezansi njengefayela elibizwa ngokuthi yi-emergency.php empandeni yokufakwa kwakho kwe-WordPress (umkhombandlela ofanayo oqukethe i-wp-config.php).
Esipheqululini sakho, vula i-http: //example.com/emergency.php.
Njengoba uyalelwe, faka igama lomsebenzisi lomlawuli (imvamisa umlawuli) nephasiwedi entsha, bese uqhafaza Izinketho Zokubuyekeza. Umlayezo ukhonjiswa kuphawula iphasiwedi eshintshiwe. I-imeyili ithunyelwa kumlawuli we-blog ngolwazi olushintshiwe lwephasiwedi.
Susa emergency.php kusuka kuseva yakho uma usuqedile. Ungayishiyi kuseva yakho njengoba omunye umuntu angayisebenzisa ukushintsha iphasiwedi yakho.
Nayi ikhodi engaphakathi kwefayela lombhalo. Qamba kabusha eziphuthumayo.txt ku- emergency.php bese uyibeka empandeni yokufakwa kwakho kwe-WordPress. NJENGOBA KUXWAYISIWE: Susa ifayili ngemuva kokulisebenzisa!
Tags: iphasiwedi elahlekile ye-wordpresssetha kabusha iphasiwedi yomlawulisetha kabusha iphasiwedi ye-wordpresseziphuthumayo ze-wordpress
I-Google + Yezamabhizinisi
Mar 9, 2012 ku-5: 57 PM
Ucingo oluhle ekususeni ifayela ngemuva kokusetshenziswa. Ngiyabona nje ukuskena kwe-bots kwe- emergency.php
Jul 10, 2012 ngo-11: 11 PM
Yize benginelinye icebo lokululama, lokhu kusebenze kahle! Ngiyabonga ngokungongela isikhathi futhi!